‘रिपोर्टरका लागि सबै मिडियामा विपद् कोष चाहिन्छ’ : प्रशन्न पोखरेल, गोरखा (अन्तर्वार्ता) - DISASTER REPORTING RESOURCES FOR THE MEDIA
‘रिपोर्टरका लागि सबै मिडियामा विपद् कोष चाहिन्छ’ : प्रशन्न पोखरेल, गोरखा (अन्तर्वार्ता)
“अहिले सबै सञ्चारमाध्यम सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छन्”
समाचारदाता, दरौंदी दैनिक, गोरखा।
कोषाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, गोरखा
बैशाख १२ गते म गोरखाको बोर्लाङ गाविसको क्यामुन्टारमा थिएँ। त्यहाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा जलाशयको सतहले डुबानमा पर्न सक्ने क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको भेला थियो। म रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुगेको थिएँ। तर भूकम्पले कार्यक्रम बिथोल्यो।
फिल्डमा पुग्दा रुवाबासी सुनिथ्यो। समाचारका लागि आवश्यक जानकारी दिने मानिस भेट्न धौ धौ पर्थ्यो। पूर्ण समाचार लेख्न सकिँदैनथ्यो। समाचारहरु अपुरो नै रहेका थिए।
महाभूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा नै भएकोले होला, यहाँका मानिसहरुमा भूकम्पको त्रास अन्यत्र भन्दा धेरै थियो। पत्रकार पनि अछुतो रहेनन्। १२ बैशाखको मध्याह्न महाभूकम्प गयो। उक्त दिन जिल्लामा रहेका रेडियो बन्द भए। भोलिपल्ट (१३ बैशाख) साँझ ६ बजेदेखि च्वाइस एफएम सञ्चालनमा आयो। १४ बैशाखदेखि “दरौंदी दैनिक” प्रकाशित भयो। रेडियो गोरखाले त्रिपालमुनिबाट दैनिक १९ घण्टा प्रसारण गर्दै आएको छ। भूकम्पपछिको एक महिना गोरखकाली एफएम बन्द रह्यो। भूकम्पले भएको प्राविधिक समस्याले गर्दा एफएम चलाउन सकिएन। मर्मतपछि रेडियो पुनः प्रसारणमा आएको छ। अहिले सबै सञ्चारमाध्यम सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छन्।
भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्ति र यस्तै आपतकालीन अवस्थामा काम गर्नका लागि कत्तिको पूर्वतयारी थियो? जिल्लाका पत्रकार तत्काल रिपोर्टिङ जान सक्ने अवस्था थियो वा थिएन?
भूकम्पपछि गोरखाका पत्रकारहरु सक्रिय रह्यौं। भूकम्प जाँदाजाँदै पनि पत्रकारले घर भत्केका तस्बिर/भिडियो खिच्न भ्याएका छन्। तर आपतकालीन अवस्थामा रिपोर्टिङका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव छ। मोवाइलको चार्ज सकिन्छ, पावर ब्याक अप छैन। आवतजावत गर्न गाडी चाहियो, मोटरसाइकल हुनेलाई पेट्रोल चाहियो, यस्तै बेलामा यातायात अबरुद्ध हुन्छ, पेट्रोलपम्प खुल्दैनन्। विपद्का लागि भनेर यस्ता अत्यावश्यक सामग्री मौजाद राख्ने चलन पनि थिएन।
मुख्य तीनखालका समस्या भोगियो। पहिलो, यातायातको समस्या। दोश्रो, समाचार स्रोत भेट्टाउन कठिन थियो। तेश्रो, रिपोर्टिङ सामग्रीको अभाव।
तीन तलामाथि रहेको च्वाइस एफएम स्टुडियोबाट स्रोताहरुलाई सुरक्षित र खुला चौरहरुमा बस्न आग्रह गरिएको थियो। अरुलाई सुरक्षित तरिकाले बस्न भन्दै सूचना दिने सञ्चारकर्मी आफै भने भत्किएको घरको तीन तलाभित्रको स्टुडियोमा थिए। आफू असुरक्षित रहेर हजारौं स्रोतालाई सुरक्षित राख्न पत्रकार हरपल खटिरहे। चर्किएको घरको तीन तलाबाट रेडियो गोरखाको प्रसारण सामग्री झिकेर अन्यत्रैबाट प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। परकम्पको बेवास्ता गर्दै रेडियोका सामग्री झिकियो र त्रिपालमुनि सामान जडान गरेर रेडियो प्रसारण भयो। भूकम्पका अपटेड रेडियोले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।
भूकम्पले के सिकायो भने भूकम्पप्रतिरोधात्मक घरमा सञ्चार माध्यम राख्नुपर्ने रहेछ। रेडियो स्टेसनको विकल्पको रुपमा हामीसँग ‘डोको रेडियो’ को सामान भएको भए विपद्का बेला तत्कालै स्रोतामाझ सञ्चार गराउन सकिन्थ्यो। वैकल्पिक ऊर्जा, अन्य मेसिनरी सामानहरुको वैकल्किप ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उत्तरी गोरखाको सात गाविस बाहेक जिल्लाका ६० गाविस र दुई नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न वडाहरुमा पत्रकार पुगिसकेका छन्। उत्तरी भेगमा गएको पहिरोबारे हेलिकोप्टरबाट कैद गरिएका दृश्यहरु काम लाग्यो। गाउँ–गाउँमा घाइतेको उद्धार, राहत वितरणको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकन गर्ने मौका पत्रकारले पाएका थिए।
त्रिपालमुनि सुत्केरीले पाएका सकसदेखि बालबच्चा, महिलामा देखिएको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न पत्रकारहरुले मनोसामाजिक परामर्शदाताको आवश्यकता रहेकोबारे समाचार प्रकाशित गरे। घाइतेको उद्धार, राहत वितरणमा देखिएको समस्या र पहिरोजस्ता समाचार दिन सकेको यसअघि प्रकाशन भएका पत्रिका र प्रसारण भएका रेडियोका समाचारहरुले पुष्टि गर्छन्। हिँडेर गाउँ–गाउँमा पहिरो छिचोल्दै रिपोर्टिङ गरेर समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्दा अप्ठ्यारो भने निकै भएको थियो।
सञ्चार माध्यमबाट पनि विपद्मा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने गाइडलाइन थिएन। रिपोर्टर कहाँ, कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे पनि सञ्चारमाध्ययले खोजी गरेको भेटिएन। महाभूकम्प गएको एक सातापछि मात्रै ‘घरतिर कस्तो छ? खोजपूर्ण समाचार लेखेर पठाउनुहोला’ जस्ता निर्देशनसहितको फोन राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पत्रकारहरुलाई आएको थियो। राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जिल्लाका रिपोर्टरहरुलाई महाभूकम्पको केन्द्रविन्दु पुगेर रिपोर्टिङ गर्न, नभए जागिर चट हुने जस्ता कुराहरु समेत गरेको भेटियो।
पाठकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन समाचारको विषय कसरी छान्नुहुन्थ्यो? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय छनोट र समाचार प्रस्तुतिकरणको निर्णय कसरी हुन्थ्यो?
सबैभन्दा पहिले घाइतेको उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासनले तदारुकता देखाओस् भन्ने हेतुले उद्धार सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भयो। घाइतेको उद्धार करिब सकिएपछि राहत वितरणबारेका समाचारले प्राथमिकता पाए। पहुँचको आधारमा राहत वितरण गरेको देखेपछि स्थानीय प्रशासनलाई समाचारमार्फत् समानुपातिक राहत वितरणको लागि घच्घच्यायौं। विपद्पछि पहिले उद्धार, त्यसपछि राहत र पुनःबासको लागि पहल गर्ने खालका समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ। समाचारको प्राथमिकता सम्पादकीय मण्डलले तय गर्छ।
अघिकांश समाचार घटनास्थलमै पुगेर फर्केपछि तस्बिरसहित प्रकाशित भएको छ। मानिसको मृत्यु भएको सम्बन्धी तथ्याङ्क भने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र प्रहरीले पुष्टि गरेपछि प्रकाशन/प्रसारण गरियो। १२ बैशाखदेखि नै पत्रकारहरु फिल्ड रिपोर्टिङमा थिए। फिल्डमा पुग्दा रुवाबासी सुनिथ्यो। समाचारका लागि आवश्यक जानकारी दिने मानिस भेट्न धौ धौ पर्थ्यो। पूर्ण समाचार लेख्न सकिँदैनथ्यो। समाचारहरु अपुरो नै रहेका थिए।
पत्रकार पीडित भएपनि समचार लख्दै गर्दा आफ्नो पीडा भुल्नुपर्छ। भुल्न सकिएन भने त्यो निष्पक्ष पत्रकारिता भएन। जस्तो मेरो गाउँको घर भत्केको छ। भूकम्प गएको एक महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो घर गएको छैन, तर समाचार स्रोतको घर घर पुगेको छु। समाचार लेखेको छु।
मुख्य तीनखालका समस्या भोगियो। पहिलो, यातायातको समस्या। पीडितसम्म पुग्न यातायातको समस्या थियो। सडकमार्ग चिराचिरा परेकाले हिँड्नु वा हेलिकप्टर चढ्नुको विकल्प थिएन। घाइतेको उद्धारमा खटेको हेलिकप्टर चढेर गोरखाका पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्न चाहेनन्। बरु एकजना घाइतेको उपचार हुन्छ भनेर पत्रकारले घाइतेको उद्धार हुञ्जेल हेलिकप्टर चढेनन्। राहत बोकेर ठाउँ–ठाउँ पुगेका हेलिकप्टरमा भने केही पत्रकारले चढ्ने अवसर पाएका थिए। तर सबै पत्रकारले त्यो अवसर पाएनन्।
दोश्रो, समाचार स्रोत भेट्टाउन कठिन थियो। हचुवाको भरमा पल्लो गाउँमा यति जना मरे, उति पुरिए भन्ने खबर आउँथ्यो। सरकारी अधिकारी तथा प्रहरीहरु त्यस्ता खबर पुष्टि गर्न सकिरहेका थिएनन्। हामी उनीहरुको भर पर्नुपर्ने अवस्था। पत्रकारहरु गाउँ पुगेर यो घरमा कति जना मरे? भनेर सोध्नलाई पनि मान्छे भेट्न पनि मुस्किल हुथ्यो।
तेश्रो, रिपोर्टिङ सामग्रीको अभाव। क्यामेरा, रेकर्डर र सवारीसाधनमा लाग्ने चार्ज, पेट्रोलको समस्या थियो। विद्युत् अबरुद्ध भएपछि क्यामेरा र रेकर्डरले काम गरेन।
मिडियाले खेलेका भूमिकालाई मानिसहरुले प्रशंसा गरेका छन्। तर सदरमुकाम आसपासको क्षेत्रको मात्रै समाचार प्रकाशित भयो भन्दै दुर्गम भेगका मानिसहरु रुष्ट भएको पनि पाइयो।
मृतकको संख्या, घाइतेको उद्धार लगायतका समाचार प्रारम्भिक चरणमा लेखिएको हुनाले त्यसको फलोअप गरिराख्नु जरुरी थिएन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा गोरखामा ४४३ को मृत्यु भएको छ। ११ सय बढी घाइते र २२ जना बेपत्ता छन्। बेपत्तामध्ये कोही भेटिए खोज्ने हो। घाइतेहरुको अवस्थाबारे भने फलोअप गरिएको छ। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे फलोअप बिस्तारै भैरहेको छ।
पहिलो, क्यामेरा, मोबाइल तथा रेकर्डर चार्ज गर्ने ब्याक अप आवश्यक छ। दोश्रो, यातायातामा लाग्ने पेट्रोल/डिजेल मौज्दात राख्नुपर्ने देखिन्छ। तेश्रो, राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तथा स्थानीय सञ्चार माध्ययमा विपद्का बेला रिपोर्टरलाई दिने आर्थिक कोष खडा गर्नुपर्छ। चौँथो, विपद्का बेला पत्रकारलाई सामान्य अवस्थाको भन्दा केही बढी पारिश्रमिक दिनुपर्छ जसले गर्दा उसले परिवारलाई सुरक्षित राख्न सकोस् र ऊ ढुक्कसँग गाउँगाउँमा रिपोर्टिङका लागि जान सकोस्।
अघिकांश अनलाइन, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियोले पत्रकारलाई काम लगाउने तर पारिश्रमिक नदिने भेटिएको छ।, नियुक्तिपत्र समेत दिँदैनन्। मिडिया चलाउने तर पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्तिमा सुधार आउनुपर्छ। जबसम्म पत्रकारहरु घरव्यवहार चलाउन सक्नेगरि तलब पाउँदैनन्, नेपाली मिडिया र पत्रकार व्यवसायिक हुन सक्दैनन्। बाहिर आदर्शको कुरा गरे पनि पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी नहुँदा पत्रकारले काम गर्न सकिरहेको हुँदैन। आफ्ना अनुभव राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद।
मिडियाका लागि विपद् रिपोर्टिंग स्रोत, १५ जून २०१५
Be the first to comment on "‘रिपोर्टरका लागि सबै मिडियामा विपद् कोष चाहिन्छ’ : प्रशन्न पोखरेल, गोरखा (अन्तर्वार्ता)"